आमाले दिएको कागज झोलाबाट निकालेर पढें | Nepali Christians
आमाले दिएको कागज झोलाबाट निकालेर पढें
July 23, 2014 12:21 pm by: Admin Category: Articles, Testimonials A+ / A-
खुशीको पहिलो हात आफ्नो एफ.एम जो कोही मानिस सधैं महान व्यक्ति बन्न चाहान्छ । उ आफू र आफुले गरेको काम ठूलो अनि संसार भर चर्चितहोस…यो चाहाना सबैमा हुन्छ । धेरैले आफु ठूला कहलिनको लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेर धेरै प्रकारका कार्य गर्दछन् तर त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र हुन्छ । संसारका थोरै व्यक्तिले मात्र दीन दुःखीहरुको सेवा गर्ने दर्शन देखेर शुन्यबाट निःस्वार्थ सेवा शुरुवात गरेको पाइन्छ । जस मध्ये, दुःखी अनि गरिबको सेवा गर्नकै लागि स्थापना भएको एक संस्था हो, मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (ज्म्ऋक्) । जुन संस्थाको शुरुवात संस्थापकको विवाहमा साटेको औंठी समेत बेचेर भएको थियो । यस संस्था अन्तर्गत २ वटा अस्पताल, ३ वटा सुस्त मानसिक समस्या भएको बालबालिका पुर्नस्थापनाको लागि आशा बालविकास, एक अन्तराष्ट्रिय स्तरको विद्यालय, जनस्वास्थ्य र २ वटा रेडियो सञ्चालित रहेका छन । जस मध्ये एउटा रेडियो हो, ओखलढुंगामा सञ्चालित आफ्नो एफ.एम १०४.८ मेघाहर्ज । ओखलढुंगामा सञ्चालन भएको ६ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस रेडियोले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला, बालबालिका लगायतका सुचना मनोरञ्जन जस्ता सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम गर्दछ ।
एक दिनको कुरा हो, २०६९ साल माघ महिनामा आफ्नो एफ. एम.को वार्षिकोत्सवमा कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई फलफुल वितरण गर्ने योजना अनुसार फलफुल वितरण गर्नको लागि अनुमति लिन भाई एस.बी र म कारागार गएका थियौं । त्यसै बखत कैदीहरुलाई त्यँहाको समस्या के के छन ? भनेर हामीले सौध्यौं । एक जना महिलाले आफ्ना दुई जना नानीहरु आफुसँगै जेलमा रहेको बताउनु भयो । ठुली छोरी र छोरा……….। हामीले त्यो कुरा थाहा पाए पछि बुभ्ने कोशिस ग¥यौं.सानो छोरा उहाँसँगै सायद साँढे १ वर्षको होला.. हामीले.सोध्यौं, अनि छोरी खोइ त ? .स्कूल गएको छ । हाम्रो प्रश्न कुन स्कूल ?.त्यँहादेखि झण्डै हिंडेर जाँदा हामी ठूलो मान्छेलाई बीस मिनेट लाग्ने जाल्पा मा.वि.सरकारी विद्यालय…..। अझ ४ वर्षको बालिका बाटोमा खेल्दै जाँदा विद्यालय समयमा नपुग्ने, कहिले विद्यालय नै नपुगी आधा बाटोबाटै फर्कने कुरा समेत आमाले सुनाउनु भयो । ती निर्दोस बालबालिका आमासँगै जेलको सजाय भोग्न बाध्य देख्दा कस्को मन नदुख्दैन होला ? यो कुराले मेरो पनि मन भित्र चसक्स चसक्क घोचिरहेको थियो । यसै क्रममा आमाले हामीसँग आफ्नो नानीलाई राम्रो शिक्षा दिने इच्छा भएको, आज भोली राम्रो, गुणस्तरीय मानिने निजी अंग्रजी विद्यालयमा पढाउने भएकोले कुनै संघसंस्थासँग सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नु भयो हामीले त्यो उहाँको अनुरोधलाई रेकर्ड गरेर आफ्नो एफ.एफबाट प्रशारण गरिदियौं ।
यो कुरा हल्लीखल्ली भए पछि अरु टेलिभिजनमा रिर्पोटिङ्ग गर्ने २ जना पत्रकार पनि पुगेका थिए रे ! केही समय पछि वैशाख महिनामा जुन कारागारको महिलाले आफ्नो नानीलाई अंग्रेजी विद्यालयमा पढाउने इच्छा भएको र सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् र रेडियोबाट प्रशारण गरिएको थियो, त्यहि नानीलाई सदरमुकाम स्थित रहेको नयाँ सबुज गण र शुभलक्ष्मि इङ्गलिस स्कूलको सहयोगमा इङ्गलिस स्कूलमा पढाउने खबर हामीलाई प्राप्त भयो । यो कुरा सुन्दा हामी आफ्नो एफ एम परिवार पनि खुशी भयौं । पछि फेरी म कारागार पुगें, ती नानीकी आमाले खुशी हुदै आफ्नो छोरीलाई सहयोग गरिदिएकोमा आफ्नो एफ एम प्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । शुभलक्ष्मि इङ्गलिस स्कूलमा एल केजीबाट पढ्न शुरु गरेकी बालिका मुना कोइरला अहिले यु के जीमा अध्ययनरत छिन । हाल सोही विद्यालयको होस्टेल मै बस्छिन उनी….।
अहिले उनको गाँस, बास, शिक्षादिक्षा सबै खर्च विद्यालयले नै बेहोरीरहेको छ । अंग्रेजी स्कूलमा पढ्न पाउँदा मुना पनि दङ्ग छिन् । केही समय अगाडी म उनलाई भेट्न विद्यालय पुगें र उनीसँग कुरा गरें उनले ३ दिन वा त्यो भन्दा लामो विदामा मम्मी र भाईसँग बस्न जान्छु,, भविष्यमा डाक्टर बन्ने कुरा मलाई सुनाइन । विद्यालयको प्रधान अध्यापकले पनि उनको पढाई राम्रै भएको बताउनुभयो । मैले मुनालाई भेट्दा क्लिक गरेको केही उनको तस्विर….. मुनासँग छुटे पछि उनको आमालाई भेट्न म जेल पुगें । मैले मुनालाई भेटेर आएको सुनाए र छोरीले मलाई भविष्यमा डाक्टर बन्ने इच्छा भनेकी कुरा सुनाउँदै मैले खिचेको तस्विर देखाए ।
छोरी स्कूल पोशाकमा चिटिक्क परेको देखेर दङ्ग देखिन्थिन् । मैले मुनासँग कुरा गरेको भिडियो रेकर्ड गरेको त्यो पनि देखाँए, आफ्नी छोरीले मसँग गरेको कुरा सुन्दा साथै देख्दा उनको आँखा रसाएर आँशु झर्ला झैं भा‘ थ्यो । उनले जर्बजस्ति आँशुलाई थामिन र खस्न दिइनन् । यतिकैमा कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो, उनको श्रीमान केही समय अगाडी जेल मुक्त भएका रहेछन् । उनीहरु ज्यान केशमा सँगै जेल परेका थिए । तर हाल उनको श्रीमानले कमै फोन गर्दा रहेछन् । मुनाको आमाको र उनीसँगै कैदी जीवन बिताइरहेका महिलाहरुको कुरा अनुसार अब भविष्यमा सँगै जीवन बिताउने आशा कमै रहेको बुझें । रेडियोले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा फलफुल वितरण गरेको, उनीहरुको मनको कुरा सुनेर रेडियोबाट प्रशारण गरेकै कारणले होला हाम्रो सम्बन्ध नजिक भइसकेको छ । मैले मौका मिलेसम्म उनीहरुलाई भेट्न जान्छु, उनीहरु सहजै आफ्ना मनका कुराहरु बाँडचुड गर्ने गर्छन् । म ख्रिष्टियन भनेर पनि उनीहरुलाई थाहा रहेछ ।
एक पटक फलफुल वितरण गर्ने क्रममै उनीहरुले मलाई सुटुक्कै बोलाएर बाइबल अध्ययन गर्ने इच्छा भएकोले केही बाइबल उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरे । उनीहरुकै आग्रह अनुरुप मैले केहि समय पश्चात नयाँ करारका ५ थान बाइबल उनीहरुको हातमा थम्याइदिँएकी थिए । आफ्नो मनको कुरा सु्न्ने भएकैले होला, मुनाकी आमाले यो आफ्नो एफ एमले दुःखी, गरिब र हामी जस्ता पिडित कैदी बन्दीहरुको पनि समस्या बुझिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु, अझ आफ्नो एफ एमको उत्तरोक्तर प्रगति हुदै जाओस् भनिन् । सँगै भित्र गएर एउटा कागजको टुक्रा ल्याएर मेरो हातमा थमाइन् । उनीहरुसँगको भेटघाटमा हामी कति जनाले गल्ती गरेर सजाय भोग्दै छौं तर कति जना फसाइएका पनि छौं । हामीलाई अरु मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, भक्कानिएको आवाजमा… भन्दै थिए । हामी जेलमुक्त भएर बाहिर गएर पनि कसरी जीउने ? हामीलाई हाम्रै परिवारहरुले समेत बुभ्दैनन् । हामीलाई बुभ्नेहरु एकदमै कम्ती छन् । जस मध्ये तपाई एक हुनुहुन्छ । मैले उनीहरुको सान्त्वना स्वरुप केही शब्द “संसारमा सबैले गल्ति गरेका हुन्छन्, कसैले जानेर गर्छन, कसैले नजानेर गर्छन त कसैले ठूला र कसैले साना गल्ति गरेका हुन्छन् त्यसैअनुरुप आज तपाइहरु यहाँ हुनुहुन्छ । तर मान्छले आफुले गरेको गल्तिलाई स्वीकार्नु पर्छ, प्रायश्चित गर्न पर्छ । अब तपाँइहरु यहाँबाट छुट्नु भए पछि एक असल उदाहरणीय व्यक्ति बन्न कोशिस गर्नुस् म तपाँइहरु असल भएको देख्न चाहान्छु, भनेर यति मात्र बोलें । अनि आज मेरो मिटिङ्गमा जानुपर्ने कुरा सुनाएर अरु कुरा फेरीको भेटमा गरौंला भने, उनीहरुले अब फेरी कहिले आउनुहुन्छ ? प्रश्न गरे, म समय मिलाएर आउँछु….यतिकैमा मुनाकी आमाले म तपाँइसँग एउटा कुरा भन्न चाहान्छु भनिन् । मैले भन्ने अनुमति दिए । उजले मेरो छोरा ३ वर्ष पुरा भयो अकों वर्ष स्कूल हाल्नुपर्छ, छोरीलाई तपाँइहरुकै सहयोगले गर्दा पढ्न पाएकी छिन् छोराको लागि पनि केही सहयोग गरिदिन बिन्ति गरिन् ।
अबको २ वर्षमा उनी जेलबाट छुट्नेवाला छिन तर उनको श्रीमानसँग राम्रो सम्बन्ध नभएकै कारण नानीहरुलाई पढ्न संघसंस्थाले सहयोग गरिदिए, जेलबाट छुटे पछि आफु उनीहरुको भविष्य उज्वल बनाउनकै लागि भए नि एक पटक वैदेशिक रोजगारमा जाने आए पछि आफ्ना नानीहरुलाइै आफुसँगै राखेर पढाउने योजना सुनाइन् । र मैले हामीले गर्ने सहयोग गर्छौं भनेर म उनीहरुसँग फेरी भेट्ने बाचा गर्दै बिदा भएँ । फर्कंदै गर्दा उनले दिएको कागजमा के लेखेको होला भनि खुलदुली लागेकोले आएर मुनाकी आमाले दिएको कागज झोलाबाट निकालेर पढें, जुन कागजमा आफ्नो एफ एमले सहयोग गरेकोमा धन्यवादका शब्दहरुले भरिएको चिठ्ठी रहेछ । जुन चिठ्ठीमा लेखिएको शब्दहरु नियाल्न सकिने नैे छ……..
उनले लेखेको चिठ्ठी पढ्दै जाँदा अन्तमा यस आफ्नो एफ एमको कारण मेरी छोरीले राम्रो पढ्न पाएकी कारण म अत्यन्त खुशी छु र यो खुशीको पहिलो हात भनेको आफ्नो एफ एमलाई ठान्दछु । खुशीको पहिलो हात भनेको आफ्नो एफ एमलाई…भन्ने हरफमा पुग्दा यो कथा लेख्ने प्रेरणा मिल्यो र लेखें । यसरी आफ्नो एफ एमको सानो काम, प्रयासले आमाबुबाका कारण कैदी बनेकी बालिका मुनाको उद्धार भएको छ, जीवन बद्लिएको छ । त्यसैले मुना, उनकी आमासँगै म अनि हामी रेडियो परिवार पनि खुशी छौं । दीन दुःखी, गरिबको सेवा गर्नकै लागि स्थापना भएको संस्था, मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (ज्म्ऋक्)द्धारा ओखलढुंगामा सञ्चालित आफ्नो एफ एमले सेवा पु¥याएको छ र पु¥याइरहनेछ । सुखी, दुःखी, गरीबी, कैदीबन्दी, असहाय सबैको आफ्नो एफ एम………।
बिनु माया राई
आफ्नो एफ एम ओखलढुंगा
आमाले दिएको कागज झोलाबाट निकालेर पढें Reviewed by Admin on Jul 23 . खुशीको पहिलो हात आफ्नो एफ.एम जो कोही मानिस सधैं महान व्यक्ति बन्न चाहान्छ । उ आफू र आफुले गरेको काम ठूलो अनि संसार भर चर्चितहोस...यो चाहाना सबैमा हुन्छ । धेरैले खुशीको पहिलो हात आफ्नो एफ.एम जो कोही मानिस सधैं महान व्यक्ति बन्न चाहान्छ । उ आफू र आफुले गरेको काम ठूलो अनि संसार भर चर्चितहोस...यो चाहाना सबैमा हुन्छ । धेरैले Rating: 0
कोरसहरु १-२५८...रोमन क्याथोलिक चर्चका थुप्रै अबाइबल...